” ယူနိုက်တက် ပရိတ်သတ်တွေ အကြားချင်ဆုံး စကားကို ပြောကြားသွားခဲ့တဲ့ ဒေါ့မွန် အသင်းမှ အင်္ဂလန်ကြယ်ပွင့် တိုက်စစ် ကစားသမား ဆန်ချို “ – Sport Gaber
May 16, 2021 - by Sports Gaber - LeaveaComment
ယူႏိုက္တာ အသင္းသည္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရာသီမွာကတည္းက ေဒါ့မြန္ အသင္း မွ အဂၤလန္ျကယ္ပြင့္ တိုက္စစ္ ကစားသမား ဆန္ခ်ိုကို ေခၚယူဖို႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ အေျပာင္းအေ႐ႊ႕ဟာ ပ်က္ျပယ္ခဲ့ရၿပီး ဒီရာသီမွာလည္း ထပ္မံေခၚယူဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာပါ။
ယူႏိုက္တက္ရဲ႕ တိုက္စစ္ေနရာအတြက္ ေဒါ့မြန္ အသင္း မွ အဂၤလန္ျကယ္ပြင့္ တိုက္စစ္ ကစားသမား ဆန္ခ်ို မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေနတဲ့ ကစားသမား ( 1 ) ေယာက္ သဖြယ္ျဖစ္ေနၿပီး ယူႏိုက္တက္ဘက္ကလည္း ေဒါ့မြန္ အသင္း မွ အဂၤလန္ျကယ္ပြင့္ တိုက္စစ္ ကစားသမား ဆန္ခ်ို ကို ရရွိဖို႔ အသည္းအသန္ႀကိဳးပမ္းေနတာပါ။
လက္ရွိမွာ ေဒါ့မြန္ အသင္း မွ အဂၤလန္ျကယ္ပြင့္ တိုက္စစ္ ကစားသမား ဆန္ခ်ို ကိုေခၚယူဖို႔အတြက္ ကလပ္အသင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေခၚယူရန္. ျကိုးစားနေပမယ့္ ကစားသမားကိုယ္တိုင္ကေတာ့ ယူႏိုက္တက္ အသင္း ကိုသာ ဦးစားေပး ေျပာင္းေ႐ြ့ခ်င္ေနတာ ေတြ့ရဘာတယ္ ။
ေဒါ့မြန္ အသင္း မွ အဂၤလန္ျကယ္ပြင့္ တိုက္စစ္ ကစားသမား ဆန္ခ်ို ကိုယ္တိုင္ကလည္း ယူႏိုက္တက္ကို အျမန္ဆုံးေျပာင္းေ႐ႊ႕ခြင့္ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ ၎ရဲ႕ ေအးဂ်င့္ျဖစ္သူကို တိုက္တြန္းထားသလို ကစားသမားနဲ႔ ယူႏိုက္တက္အသင္းၾကားေဆြးေႏြးမႈေတြလည္း ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ေဒါ့မြန္ နဲ႔ ယူႏိုက္တက္တို႔ (2) သင္း ၾကားမွာေတာ့ ေဒါ့မြန္ အသင္း မွ အဂၤလန္ျကယ္ပြင့္ တိုက္စစ္ ကစားသမား ဆန္ခ်ို နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈေတြ မစတင္ရေသးဘူးလို႔သိရပါတယ္။ ဆန္ခ်ိဳကို ေခၚယူဖို႔အတြက္ ယူႏိုက္တက္အေနနဲ႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေၾကး သန္း 89 မဟုတ္ ရင္ 90 ေလာက္ ေပးေခ်သြားရဖြယ္ရွိေနပါတယ္။
ယူနိုက်တာ အသင်းသည် ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီမှာကတည်းက ဒေါ့မွန် အသင်း မှ အင်္ဂလန်ကြယ်ပွင့် တိုက်စစ် ကစားသမား ဆန်ချိုကို ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် အပြောင်းအရွှေ့ဟာ ပျက်ပြယ်ခဲ့ရပြီး ဒီရာသီမှာလည်း ထပ်မံခေါ်ယူဖို့ ကြိုးစားနေတာပါ။
ယူနိုက်တက်ရဲ့ တိုက်စစ်နေရာအတွက် ဒေါ့မွန် အသင်း မှ အင်္ဂလန်ကြယ်ပွင့် တိုက်စစ် ကစားသမား ဆန်ချို မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေတဲ့ ကစားသမား ( 1 ) ယောက် သဖွယ်ဖြစ်နေပြီး ယူနိုက်တက်ဘက်ကလည်း ဒေါ့မွန် အသင်း မှ အင်္ဂလန်ကြယ်ပွင့် တိုက်စစ် ကစားသမား ဆန်ချို ကို ရရှိဖို့ အသည်းအသန်ကြိုးပမ်းနေတာပါ။
လက်ရှိမှာ ဒေါ့မွန် အသင်း မှ အင်္ဂလန်ကြယ်ပွင့် တိုက်စစ် ကစားသမား ဆန်ချို ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက် ကလပ်အသင်းတော်တော်များများက ခေါ်ယူရန်. ကြိုးစားနပေမယ့် ကစားသမားကိုယ်တိုင်ကတော့ ယူနိုက်တက် အသင်း ကိုသာ ဦးစားပေး ပြောင်းရွေ့ချင်နေတာ တွေ့ရဘာတယ် ။
ဒေါ့မွန် အသင်း မှ အင်္ဂလန်ကြယ်ပွင့် တိုက်စစ် ကစားသမား ဆန်ချို ကိုယ်တိုင်ကလည်း ယူနိုက်တက်ကို အမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရအောင် လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ ၎င်းရဲ့ အေးဂျင့်ဖြစ်သူကို တိုက်တွန်းထားသလို ကစားသမားနဲ့ ယူနိုက်တက်အသင်းကြားဆွေးနွေးမှုတွေလည်း ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒေါ့မွန် နဲ့ ယူနိုက်တက်တို့ (2) သင်း ကြားမှာတော့ ဒေါ့မွန် အသင်း မှ အင်္ဂလန်ကြယ်ပွင့် တိုက်စစ် ကစားသမား ဆန်ချို နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးမှုတွေ မစတင်ရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ ဆန်ချိုကို ခေါ်ယူဖို့အတွက် ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြေး သန်း 89 မဟုတ် ရင် 90 လောက် ပေးချေသွားရဖွယ်ရှိနေပါတယ်။
Previous Article ” လာမယ့်ရာသီမှာ ယူနိုက်တက် အသင်းအတွက် ဂိုးအများဆုံး ကစားသမား ဖြစ်ခဲ့ရင် မြင့်မားတဲ့ဆုကြေးငွေရရှိမယ့် ဥရုဂွေး ဂိုးသွင်ဘုရင် တိုက်စစ် ကစားသမား ကာဗာနီ “
Next Article သူမကို ဝေဖန်နေတဲ့သူတွေ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အားပေးချစ်ခင်ကြတဲ့သူတွေရှိကြောင်း ပြောလာတဲ့ နေခြည်ဦး